Degso Malwarebytes Anti-Malware loogu talagalay Windows
Degso Malwarebytes Anti-Malware
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (60.10 MB)
Degso Malwarebytes Anti-Malware,
Daraasiin barnaamijyo kala duwan ah oo qatar ku ah kombuyuutarradeena, sida fayrasyada, dixirigga, spyware, iyo waliba malware, nasiib darro waxay sababi karaan cawaaqib xumo sida xog luminta, maadi iyo anshax xumo, aad ayeyna ugu adag tahay dadka isticmaala inay iska caabiyaan dhammaantood iyagoo adeegsanaya kaliya hal antivirus.
Sababtoo ah inta barnaamijyada antivirus guud ahaan lagu guuleysto in la ogaado hanjabaadaha tooska ah, haddana kuma filna hanjabaadaha ka sii adag ee faahfaahsan. Barnaamijka Malwarebytes Anti-Malware wuxuu ka mid yahay barnaamijyada bilaashka ah ee tayada leh ee isku dayaya inay kaa difaacaan hanjabaadaha noocan oo kale ah isla markaana abuuraan darbi wax ku ool ah oo ka dhan ah software-ka xun. Hanjabaadaha ay asal ahaan ka hor tagi karto waxaa ka mid ah trojans, rootkits, gooryaan, spyware iyo waxyaabo kaloo badan.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan dhihi karnaa wuxuu xiraa oo tirtirayaa waxyaabo lagu daro sida homepage iyo toolbar oo la dhigo daalacashada shabakadaha sida govome.com, conduit, ask.com. Ka dib marka hawsha iskaanka la dhammeeyo, barnaamijku wuxuu kuugu soo bandhigayaa faylal fayraska ku jira kombiyuutarkaaga si toos ah warbixin ahaan, taasoo kuu oggolaaneysa inaad sameyso nadiifinta aad rabto.
Nidaamka nadiifinta sidoo kale waa mid aad u gaaban waxayna qaadataa dhowr ilbiriqsi, sidaa darteed waxaad uga takhalusi kartaa barnaamijyada halista ah kombiyuutarkaaga adigoon wax dadaal ah sameynin. On the tab Settings, waxaa jira dhammaan xulashooyinka lagama maarmaanka ah ee saameyn ku yeelan kara astaamaha hawlgalka aasaasiga ah ee barnaamijka isla markaana sheeg meesha aad rabto in lagaa baaro. Ha dhaafin adigoon isku dayin Malwarebytes Anti-Malware, oo ah mid ka mid ah barnaamijyada ugu wax ku oolka badan ee suuqa looga saarayo furin.
Malwarebytes Anti-Malware Noocyada
Cabirka Faylka: 60.10 MB